Umfundisi umuke wafa ethandaza olwandle - Ilanga News
Home Izindaba Umfundisi umuke wafa ethandaza olwandle
Umfundisi umuke wafa ethandaza olwandle
Kuthiwa umkakhe uthe ubeyalelwe wumoya ongcwele
IPHELE kabuhlungu inkonzo yebandla lama-Zion ebibanjwe ebusuku bangoMgqibelo kuminza owesilisa okuthiwa ube-ngumfundisi waleli ba-ndla elibizwa ngoMbuso WamaKrestu elizinze eVerulam.
Kubikwa ukuthi uMnu Bheku-musa Hlophe (43) uthathwe wu-lwandle eLa Mercy ngasoThonga-thi ngesikhathi ematasa ethanda-za namanye amalungu ebandla abehamba nawo.
Ngokwesitatimende senkampani yonogada iReaction Unit South Africa (Rusa), ithole ucingo luvela kowesifazane entathakusa yayizolo ngeSonto obedinga usizo ekhala ngokuthi umfundisi wabo usetha-thwe wulwandle.
Kubikwa ukuthi endaweni yesi-gameko, bekukhona amalungu abalelwa ku-10 okuyiwona aveze ukuthi bebesosebeni lolwandle ngesikhathi uMnu Hlophe engena emanzini eyothandaza, wabe ese-thathwa ngamagagasi.
Kuthiwa laba bazamile uku-mbheka kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ngokwalesi sitatime-nde, inkosikazi kamufi iveze ukuthi phambilini bekumele umtha-ndazo ubanjelwe eNtaphuka, eNdwedwe, kodwa umyeni wakhe wajika wabakhomba olwandle emuva kokutshelwa ngumoya oyingcwele.
Imizamo yokuthola umndeni ka-Mnu Hlophe kayiphumelelanga njengoba owesifazane okuthiwa nguFikile eshayeliwe ucingo, oku-the uma ILANGA libuza ngalesi sigameko, waluvala. Uphinde wa-shayelwa kodwa ucingo beselu-khala lungasaphendulwa.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe idokodo ngokufa ko-muntu emuva kokuba owesilisa oneminyaka ewu-43 ubudala engene emanzini eyothandaza, wa-muka.
Uthi isidumbu sakhe sitholwe izolo ekuseni wuphiko lweDurban Search and Rescue kanti kusaphenywa.
UMnu Bheki Ngcobo ongumkhu-lumeli weSouth African Zionist Churches KwaZulu-Natal, utshele ILANGA ukuthi sebezwile ngalesi sigameko yize bebengakayitholi imininingwane egcwele. Uthi ba-hlezi belishumayela ivangeli loku-thi abantu mabayeke ukuyotha-ndaza olwandle ngoba lokhu kuyi-ngozi futhi kubeka impilo yabantu engcupheni.
“Siwutholile umbiko ngalesi si-gameko kodwa sisalinde ukuzwa kahle ukuthi bekwenzenjani. Le nto iyinkinga ngoba sihlezi siba-tshela abefundisi namakholwa ukuthi mabahlukane nokuyotha-ndaza olwandle. Lokhu kugcina kubeka impilo yabantu abasuke beyobhukuda engcupheni ngoba bashiya amaqubu ezinkukhu, ku-sale negazi lezinkukhu ezisuke zinqunyiwe.
“Babodwa abasuke beyobha-bhadisa, kanti abanye balanda izi-thunywa. Size saphakamisa ukuthi okungenani mabasebenzise imifula eqhelile emiphakathini ngoba ulwandle luyingozi futhi lusetshe-nziswa ngabantu abahlukene. Sizwelana kakhulu nomndeni na-basondelene nalolu daba,” kusho uMnu Ngcobo.
Okhulumela umasipala weThe-ku uMnu Msawakhe Mayisela, uthe bahlezi besho ukuthi kakuvumelekile ukuba solwandle ebusuku ngoba kunobungozi. Uthi zikhona izindawo ezibekiwe futhi eziphe-phile ezibekelwe abasuke befuna ukuyothandaza noma abasuke be-yofuna usizo oluthile olwandle.
“Lokhu kwenziwa ngoba umasipala uyakuhlonipha ukuthi abantu banezinkolelo ezahlukene. Yinga-kho kwabekwa indawo ephephile futhi egadwa ngabatshuzi. Lokhu kuvumeleke ukuba bakwenze emi-ni ngoba kusuke kukhona abaqa-phi,” kusho uMnu Mayisela. skhom@ilanganews.co.za
Previous articleSiduve emakhazeni isidumbu sowaKwaShembe esibangwayo
Next articleUselinde izincomo zendlunkulu ‘ozoluleka’ iSilo esisha